Airpin Pro Apk Download ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Salama daholo, sosotra ve ianao amin'ny fizahana amin'ny efijery kely? Raha eny, eto izahay miaraka amin'ity rindrambaiko Airpin Pro ity, izay manolotra anao hizara ny efijery mivantana an'ny Android Mobile amin'ny Smart TV, Laptop, ary ireo fitaovana hafa. Azonao atao ny mizara ny haino aman-jery amin'ny fitaovana Android amin'ny fahitalavitra na solosainao, kinova MacOS, ary mankafy.
Araka ny fantatrao fa mivoatra haingana be ny teknolojia ary zatra miantehitra amin'ny fitaovana samihafa ny olona mba hanao zavatra tsotra. Amin'ny fotoana iray dia tsara izany satria manolotra olona hifanena aminy. Noho izany dia nozarainay ity rindranasa ity, izay hampitombo ny fifandonanao amin'ny fampiasana fitaovana Android.
Manolotra anao hiasa fitaovana elektronika Video hafa mampiasa an'io fampiharana io amin'ny Smartphone Android anao izy. Misy endri-javatra mahavariana kokoa amin'ity rindranasa ity, izay hozarainay amin'ny antsipiriany etsy ambany. Noho izany, mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary ho fantatrao momba ity fampiharana ity.
Topimaso momba ny Airpin Pro
Izy io dia rindrambaiko Android, izay novolavolain'i WaxRain Tech. Tamin'ny 2012 no novolavolaina tamin'ny voalohany, nalaza ihany koa io kinova io tamin'izany fotoana izany. Saingy noho ny endri-javatra vitsy kokoa dia tsy dia nandeha tsara izy io. Noho izany, nohavaozina imbetsaka izy io ary manolotra endri-javatra tsara indrindra.
Ny endri-javatra tsara indrindra ao amin'ny kinova farany dia ny ahafahanao mizara ny efijeryo amin'ny fitaovana 4 hafa miaraka. Ny fampiasana an'io dia azonao zaraina amin'ny efijery Smart TV, Laptop, ary fitaovana roa hafa amin'ny fotoana mety. Afaka mampiala voly olona maro indray mandeha ianao.
Manolotra anao koa izy hametraka ny kalitaon'ny fampisehoana. Raha vao mampifandray fitaovana hafa ianao dia afaka manova ny kalitaon'ny sary. Manolotra famaritana mijoro (576p), izay fampisehoana kalitao ambany indrindra. Ny famaritana avo (960p) no safidy faharoa azonao safidiana raha te hanatsara ny fampisehoana ianao.
Ny famaritana avo lenta dia manome 1080 p ary io no kalitaon'ny fampisehoana tsara indrindra, fa ny ultra (4K) dia ampidirina amin'ny fampisehoana ihany koa, izay ahafahanao mijery ny kalitaon'ny sary tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Afaka mivezivezy amin'ny Smart TV ianao amin'ny fampiasana fampisehoana 4K.
Raha vantany vao mijery horonantsary hatramin'ny fetra ianao dia hitahiry ireo angona ary amin'ny manaraka dia afaka mijery avy amin'ny toerana teo aloha ianao. Manolotra fahombiazana avo lenta amin'ny TV fahita ihany koa izy ary ny kinova farany farany dia mampitombo ny fiarovana ny Airplay.
Manolotra fanohanana ny fizarana Youtube mivantana mivantana mivantana, ahafahanao mizara horonantsary Youtube sy seho mivantana amin'ny fitaovana hafa. Azonao atao koa ny mizara horonantsary, audio, ary koa sary mihetsika. Misy fahafinaretana bebe kokoa noho ny azonao atao amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity.
anarana Airpin (Pro)
Anaran'ny fonosana com.waxrain.airplaydmr3
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 2.3 ary ny
Endri-javatra manan-danja amin'ny Airpin Pro
Rehefa nizara ny hevi-dehibe sasantsasany taminao izahay tao amin'ilay fizarana etsy ambony, dia toy izany koa izahay hizara ny sasany amin'ireo fiasa lehibe an'ity fampiharana ity. Raha mieritreritra ianao fa mety tsy hahatratra ny sasany amin'ireo teboka na fiasa izahay, dia azonao atao koa ny mizara azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Fizarana efijery amin'ny fitaovana maro indray mandeha
Azonao atao ny mametraka teny miafina amin'ny Airplay
Fanombohana mandeha ho azy
Ahoana ny fampidinana ny Airpin Pro Apk?
Raha te-hisintona ny Airpin Apk dia azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store na azonao atao ihany koa ny maka azy eto amin'ity pejy ity. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao nahavita ny fisintomana ianao dia mila manova ny fanovana sasany. Mandehana fotsiny any amin'ny setting ary sokafy ny fiarovana, avy eo alefaso 'Source tsy fantatra' ary mivoaha. Malalaka ianao izao amin'ny fametrahana azy amin'ny fitaovanao amin'ny fotoana rehetra.
Airpin Pro no fampiharana Android tsara indrindra, izay manome fidirana hizara ny efijery finday Android anao amin'ny fitaovana hafa. Afaka mijery sarimihetsika amin'ny fahitalavitra ianao raha mizara izany amin'ny Smartphone. Misy zavatra mahafinaritra kokoa azonao atao. Noho izany, misintona fotsiny ity fampiharana ity ary manomboka mankafy azy.
Sokajy Apps, Video Players & Editors Tags Airpin Apk, Airpin Pro, Airpin Pro Apk Post Fikarohana
Fampidinana APK Nearby Share ho an'ny Android [Nohavaozina 2022]